 » စမတ်ကင်းလှည့်
စမတ်ကင်းလှည့်, ဖြေရှင်းနည်းများ Fingerprint LED Lighting Guard Tour System, Fingerprint LED Lighting Patrol System, Fingerprint LED Lighting Smart Patrol System, Fingerprint Patrol Machine, Fingerprint Smart Guard Tour System, Fingerprint Smart Patrol Machine
Method ကို Reading: 125kHz EM4102 tags များ
လက်ဗွေ Reader ကို: optic
Baud မှုနှုန်း: 115200Bps
ပြသ: TFT1.8′ 128160 high-definition image ကိုခင်းကျင်းပြသ×
လက်ဗွေစွမ်းရည်: 225 အပိုင်းပိုင်း
အဖြစ်အပျက်: 500 အပိုင်းပိုင်း
သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်: 80,000 အပိုင်းပိုင်း
သက်ရောက်မှုစံချိန်စွမ်းရည်: 32,000 အပိုင်းပိုင်း
ဆက်သွယ်ရေး: USB မှတ်တော့ Pogo pin ကိုအဆက်အသွယ်
ပါဝါစားသုံးမှု: 10,000 ရရှိနိုင်ကြိမ်စကင်ကို tag ကိုစစ်ဆင်ရေး
direction အဖွဲ့: LED + တုန်ခါမှု + LCD ကို
ဘက်ထရီ: 1,000mAh ဘက်ထရီ built-in အားပြန်သွင်းနိုင်လီသီယမ်ဘက်ထရီ
ဘက်ထရီအဆင့်:5အဆင့်ဆင့် display ကို
အိုင်ပီ rating: အိုင်ပီ 65
အလုပ်လုပ်အပူချိန်: -40℃ ~ + 70 ℃
အလုပ်လုပ်စိုထိုင်းဆ: 0~ 95%
အတိုင်းအတာ: 132× 57 × 25mm
Confirm the corresponding event and the patrol opportunity automatically saves the generated data. After the inspection is completed, the patrol machine is transmitted to the central management software through the data line. The data transmitted includes the information of the inspector, the patrol point, the inspection time, စသည်တို့ကို, and the management personnel can perform the inspection on the object to be inspected, accurate analysis.
Engineering plastic case, ရေစိုခံ, shockproof, high temperature resistant, drop without damage.
2 တွင် 1 USB cable make battery charging and data downloading more easy and convenient.
ဘာသာစကား ( Simplified Chinese and Traditional Chinese, အင်္ဂလိပ်)switch freely.
prev: RFID Barrier-အခမဲ့ဝန်ထမ်းရေးရာညီလာခံတက်ရောက် Channel ကိုဂိတ်ဖြေရှင်းချက်
YXE300 စမတ်ကင်းလှည့် Stick, induction စောင့်တပ်ဖွဲ့ခရီးစဉ် Stick